Ndị Ọlụ Uweojii, ngalaba Steeti Enugwu, nọrọ ụbọchị Wednezdee, nwụchịkọọ mmadụ abụọ a na-enyo enyo na ha bụ ndị isi otu ahụ tọrọ ma gbuo onye ụkọchukwu Katọlik na Enugwu, Ụkọchukwu Clement Ugwu, n'okpuru ọchịchị ime obodo Ezeagu na Steeti ahụ.
Ụkọchukwu Ugwu bụ onye a tọrọ n'ụlọ ụka ya, Ụlọ ụka Katọlik Mak dị nsọ, dị na Obinọfia Ndiụnọ, na okpuru ọchịchị Ezeagu, n'ime abalị iri na atọ nke ọnwa Maachị, afọ puku abụọ na iri na iteghete, oge ọ na-akụ elekere iteghete nke anyasị ka o siri nzukọ lọta.
Ndị ntọ ahụ dị mmadụ anọ n'ọnụ ọgụgụ gbara ya egbe tupu ha akpụrụ ya n'ụgbọala ya, ma mechaa werekwa ego site n'ụlọ akụ ya dịka ha na ndị ezinaụlọ ya kpachara.
Ka ọtụtụ ụbọchị gasịrị ma anya ahụghị ya bụ ụkọchukwu, ndị ụlọ ụka ya gbagharịrị site na enyemaka ndị obodo ahụ were chọwa ya; ka mkpụrụ ụbọchị abụọ gasịrị, ha hụrụ ozu Ugwu ka ọ na-ere n'otu ọhịa dị n'ogige ahụ, ụbọchị Wednezdee, abalị iri abụọ nke ọnwa Maachị, afọ puku abụọ na iteghete.
Ozi sitere n'aka ndị Uweojii kwuru na ha anwụchịkọla onyeisi ma osote ya n'ime mmadụ anọ ahụ gburu ya bụ onye ụkọchukwu.
Ha gara n'ihu were kwuo na aka kpara onyeisi òtù ahụ n'Abuja ebe ya na ezinaụlọ ya nọ ka kpachara ya bụ arụ.
Onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị Uweojii na ọhaneze na Steeti ahụ, SP Ebere Amaraizu, kwuru na ha ejidela ndị omekome ahụ.
Amaraizu kwuru, "Ndị Uweojii na Steeti Enugwu na-agwa ọhaneze karịsịa ọhaneze Enugwu Steeti, na ha ejidela ọtụtụ ndị a na-enyo enyo gbasara ntọrọ na ogbugbu Ụkọchukwu Clement Ugwu, onye ụkọchukwu nọ na Ụlọ ụka Katọlik nke Mak dị nsọ na Obinọfịa Ndiụnọ na okpuru ọchịchị Ezeagu.
"Ndị ahụ a na-enyo enyo na-enyere ndị Uweojii aka ná nchọpụta ha ka ha were nwee ike jide ndị òtù ha ndị ọzọ bụ ndị nọ n'ọsọ ụkwụ eru ala ugbua"
Ọ sịrị na a ga-akpụgharị ndị ahụ a na-enyo enyo ụbọchị Tọọzdee. O kwukwara na ndị ahụ ejiderela ugbua bụ ndị gbara ụkọchukwu ahụ egbe ma werekwa ego ya site n'ụlọ akụ.